Biography ye Meyer uLansky
UMeyer Lansky wayelungu elinamandla lamafia ngexesha lokuqala ukuya kuma-1900. Wayebandakanyeka kumabini ama-mafia amaYuda kunye nama-mafia aseItali kwaye ngamanye amaxesha abizwa ngokuba yi-"Accountant Accountant".
Ubomi boBuntu boMeyer Lansky
UMeyer Lansky wazalelwa kuMeyer Suchowljansky eGrodno, eRussia (ngoku eyiBelarus) ngoJulayi 4, 1902. Unyana wabazali abangamaYuda, intsapho yakhe yafudukela e-United States ngo-1911 emva kokubandezeleka ezandleni zamagxobhozo angamaYuda).
Bahlala kwi-Lower East Side kwiNew York City kwaye ngo-1918 uLansky wayeqhuba iqela lomfana kunye nomnye umfana ongumYuda owayeya kuba ngumntu ovelele we-mafia: i- Bugsy Siegel . Eyaziwa ngokuba yi-Bugs-Meyer Gang, imisebenzi yabo yaqala ngokuba ngaphambi kokwandisa ukubandakanya ukugembula kunye ne-bootlegging.
Ngomnyaka we-1929 uLansky watshata nomfazi ongumYuda ogama linguAna Citron owayengumhlobo weNtombi Krakower. Xa umntwana wabo wokuqala, uBuddy, azalwe bafumanisa ukuba unobulwelwe obuchopho. U-Ana wamgxeka umyeni wakhe ngesimo sikaBuddy, exhalabisa ukuba uThixo ujezisa intsapho ngenxa yezenzo zobugebengu bukaLansky. Nangona baqhubeka befumana enye inyana nentombi, ekugqibeleni isibini esahlukana naye ngo-1947. Kungekudala uAna wabekwa esibhedlele sengqondo.
Ekugqibeleni, uLansky noSiegel bathatha inxaxheba kwi-gangster yase-Italy uCharles "Lucky" uLuciano .
ULuciano wayekhokelela ekuqulunqweni kobugebengu kazwelonke kwaye usolwa ngokubulala umphathi wezobugebengu waseSicilian uJoe "u-Boss" iMasseria kwiingcebiso zikaLanksy. I-Masseria yaxutywa ngo-1931 ngababetha abane, omnye wabo wayeyi-Bugsy Siegel.
Njengoko i-Lanksy ithonya lakhe lakhula waba ngumnye weebhanki ezinkulu ze-mafia, wamfumana isiteketiso se-Accountant Accountant.
Kwakhona wanyusa italente yemvelo yamanani kunye nezoshishino ekuphuhliseni imisebenzi yokugembula eFlorida naseNew Orleans. Wayeyaziwa ngokuqhuba izindlu zokugembula ezingenanto apho abadlali ababengafanele bakhathazeke ngemidlalo enomdla.
Xa u-Lansky ubukhosi bezokugembula wandisa kwiCuba wafika kwisivumelwano kunye nomphathi weCuban uFulgencio Batista. Ukutshintshiselwa ukukhawulwa kwemali, iBatista yavuma ukunika uLansky kunye nolawulo lwabahlobo bakhe kwiindawo zokulwa kunye nekhasino.
Kamva waba nomdla kwiindawo ezithembisayo zaseLas Vegas, eNevada. Uncedise i-Bugsy Siegel ukukholisa isihlwele ukuba ixhase i-Pink Flamingo Hotel eLas Vegas - ukunyakaza komngcipheko ekugqibeleni okukhokelela ekufeni kukaSiegel nokuvula indlela eya eLas Vegas namhlanje.
Ngexesha leMfazwe Yehlabathi II uLansky kubikwa ukuba wasebenzisa ii-mafia zokudibanisa ukuba ahlukane nemihlangano yamaNazi eNew York. Wenza ingqalelo ekufumaneni apho iintlanganiso zenzeka khona kwaye ziza kusebenzisa i-mafia muscle ukuphazamisa iintlanganiso.
Njengoko imfazwe yaqhubeka, uLansky wabandakanyeka kwimisebenzi yokulwa neNazi egunyaziswe nguRhulumente wase-US. Emva kokuzama ukubhalisa kwi-Army yase-US kodwa iyanqatshelwa ngenxa yobudala bakhe, waqashwa nguMbutho weNavy ukuze athathe inxaxheba kwinqanaba elenza iinkokeli zolwaphulo-mthetho ezilungelelaniswe neentlola ze-Axis.
Ebizwa ngokuba yi "Operation Underworld," le nkqubo yafuna uncedo lwe-mafia yaseItali eyayilawula ngaphambili. ULansky wabuzwa ukuba athethe nomhlobo wakhe uLucky Luciano oye wahlala entolongweni kodwa wayalawula i-mafia yaseNtaliyane. Ngenxa yokubandakanyeka kukaLansky, i-mafia yanikezela ukhuseleko kwinqanawa eNew York Harbor apho kwakhiwa khona iinqanawa. Eli lixesha lobomi bukaLansky lubonakaliswa kwincwadi ethi "uMtyholi ngokwakhe" ngumbhali u-Eric Dezenhall.
Iminyaka Kamva YaseLansky
Njengoko i-Lansky yempembelelo kwi-mafia yanda ngoko ubutyebi bakhe. Ngama-1960 ubukumkani bakhe babandakanyeka ngokukhawuleza nokugembula, ukugqithisa izidakamizwa kunye noonografi ngaphezu kokubambelela ngokusemthethweni kumahotele, iigalofu kunye namanye amashishini. Ukubaluleka kweLansky kwakukholelwa ngokubanzi ukuba kwezigidi ngezi xesha, i-rumor ngokungathandabuzekiyo yabangela ukuba akhululwe kwiintlawulo zerhafu yokufumana ingeniso ngo-1970.
Wabalekela e-Israel ngethemba lokuba uMthetho Wokubuyisa wawuya kuthintela i-US ukuba ingamlingi. Nangona kunjalo, nangona uMthetho Wokubuyiselwa uvumela ukuba nayiphi na umYuda ahlale kwi-Israel ayisebenzisayo kulabo abanexesha elidlulileyo. Ngenxa yoko, uLansky wabuyiselwa eMelika waza waziswa. Wakhululeka ngowe-1974 waza wabuya waphila ubomi boxolo eMiami Beach, eFlorida.
Nangona iLansky idla ngokuba ngumntu wefia onobuninzi obutyebi, u-Robert Lacey wezobuchwephesha uyayigxotha ingcamango enjenge-"fantasy." Ngokuchaseneyo, uLacey ukholelwa ukuba ukutshala imali kaLansky akuzange kumbone kwiminyaka yakhe yokuthatha umhlalaphantsi. akazange azuze ilifa izigidi xa efa ngumhlaza wamaphaphu ngoJanuwari 15, 1983.
Umlingiswa kaMeyer Lansky kwi "Boardwalk Empire"
Ukongeza ku- Arnold Rothstein noLucky Luciano, i-HBO series "iBhodi yeBhodi yoBugcisa" ichaza uMeyer Lansky njengomlingiswa ophindaphindiweyo. ULansky udlalwa ngumdlali we-Anatol Yusef kwaye kuqala uvela kwiNkcazo 1 Isiqendu 7.
Lacey, uRobert. Umntu omncinci: uMeyer Lansky kunye noBomister Gang. I-Random House: eNew York, ngo-1993.
History.com (isihloko seMeyer Lanksy kwi-History.com asikho.)
Biography ka-Amelia Earhart
North Angle Angle
Isihlandlo seMibutho yaseRashiya: 1906 - 1913
UDennis Kimetto: I-Sub-First ye-2: 03 iMarathon
I-Oaks eziqhelekileyo-I-Quercus Tree Species yaseMntla Melika
Kutheni Abafundi Baphula kunye Nendlela Yokuwayeka
Indlela Yokubhala Ingoma Yomculo
Iimpawu zeSpain kunye neeNdawo zokusebenzisa i-'Tener '
Iimpawu zeOlimpiki ezithakazelisayo
Iingxaki zokulungisa iingxaki kunye nokulungiswa kweeMpawu zeSignal Issues
Ukuchaza 'Ixabiso elipheleleyo' eGoli
Iinqwelo Zamawaka E-Bodhisattva
Zingaphi Iigalofu Zenze I-Hole-in One ngexesha leMasters?
Iingoma ezi-100 eziphezulu zePop yase-2013